I-Horoscope yesonto likaSepthemba 11-17 kusuka kuVasilisa Volodina
Njalo ngesonto, izinto zesikhala zishintsha isikhundla sabo, okuletha izinguquko ezithile kuma-horoscopes abo bonke abamele umbuthano wezinkanyezi. Ukuze ulungele noma yikuphi okumangazayo, qondana nezibikezelo zobuchwepheshe ezivela kuVasilisa Volodina ngesonto likaSeptember 11 kuya ku-17 kuzo zonke izimpawu ze-Zodiac.
Ekuqaleni kwesonto, izinyane lezinkanyezi kuzomele lizinakekele impilo yazo: ukuzivikela kanye nokuqina kuyoba buthakathaka. Kubalulekile ukwesaba izifo, i-hypothermia kanye ne-drafts! Emvelweni, umthelela omubi wenyanga uzoqala ukwehlisa futhi akukho okuvimbela ama-Aries ekusebenziseni ngempumelelo izinhlelo zawo ezinkulu. NgoSeptemba 15 no-16 ungakwazi ukuphumuza futhi uzikhandle - bafanelwe!
Ekuqaleni kwesonto, iTaurus ingabhekana nezinkinga ezimpilweni zabo. Kubaluleke kakhulu ukuthembela intuition yakho siqu, ukubheka izwe ngokuthe xaxa - futhi inhlanhla izobuyela ezinkunzi ze-stellar! Emkhakheni wezobuchwepheshe, umuntu kufanele azame ukungathathi izinqumo ezingenangqondo, zokukhwabanisa. NgoSepthemba 11, 14 no-15, izikhathi ezijabulisayo zingase zifike, zilungiselele futhi ungaziphuthelwa!
Leli sonto, ama-Twins azokwazi ukuxazulula izinkinga eziningi zezezimali eziqoqiwe kusukela ekuqaleni kwehlobo, njengoba kuboniswe indawo ephumelelayo ye-Mercury, umphathi weGemini, enqabeni yeVirgin. Izinsuku eziphumelele kakhulu kuzoba ngo-12 no-14 kuNhlangulana. Kodwa empilweni yakhe yomuntu siqu kuyoba khona ukuhamba okwesikhashana, okuzohlala kuze kube sekupheleni kwenyanga.
I-Jupiter e-Libra izovula ama-horizons amasha weKhansela futhi isize ukubhekana nezinkinga eziningi ezinqwabelene. Udinga nje ukukhombisa inhlangano eningi, isiyalo nokushisekela. NgoSepthemba 14 no-15, ungathembela ngokuphepha ku-intuition, ngeke ivumele abameleli bale mbonakaliso. Akunconywa ukucacisa ubudlelwane nabanye, ikakhulukazi namalungu omndeni, kuleli sonto noma yiziphi izinkinga ezisongela ukuba zingene ezinkingeni ezinkulu.
I-Venus ngesibonakaliso sikaLobert izofaka isandla empumelelweni enkundleni yothando futhi ngesikhathi esifanayo ididekile ezindabeni zezezimali nezomsebenzi. Ngakho-ke, kubalulekile ukuba uqaphele mayelana namaphrojekthi amasha neziphakamiso ezitholiwe ngalesi sikhathi, isinyathelo esiningi futhi umsebenzi ngeke nakanjani wenze okuhle. Kusukela ngoSeptemba 14, ungakwazi "ukuphuma emthunzini" futhi uhambele umgomo wakho ngesibindi.
Ngokwemali yezimali, isonto lithembisa ukuthi liphana futhi liphumelele, okubaluleke kakhulu, lingalandeli ithonya lomunye futhi liqonde imicabango yakho. I-Mercury e-Virgo isayinisekisa impumelelo ekusetshenzisweni kwemiklamo eyinkimbinkimbi kakhulu nezinhloso ezibonakala zingenakufinyeleleka. Into eyinhloko akumele udangele futhi ungadli amandla akho ezinkingeni. Emkhakheni womuntu siqu, isimo sincane kakhulu, kodwa akusona isizathu sokuphelelwa ithemba nokuyeka.
Abamele lesi sibonakaliso, ngokungafani ne-Dev, ngesonto bathembisa izinkathazo ezingxenyeni zezezimali. Kunkulu kakhulu ukulahlekelwa kwemali ngenxa yokuthengisana okungaphumeleli ngisho nokukhwabanisa. Ngakho-ke, iLibra kumele iqaphele, unakekele imvelo yayo futhi ungenzi izenzo zokwehla. Ngo-Septhemba 16 no-17, kungcono ukuchitha enkampanini enhle esifubeni semvelo, ukuze kubuyiselwe amandla okusebenza amandla, kuchitheke kuleli sonto, futhi kunciphise ukucindezeleka.
Kuleli sonto ama-Scorpios akumele athembele ekufundeni kwawo, i-Mars lesi sibonakaliso sizobeka izingibe futhi zidale izithiyo endleleni eya emgomweni olinde isikhathi eside. Ngakho-ke, ukuhlushwa okuphezulu kunesidingo, isimo sengqondo sokuziqhenya sesilungele "ukubamba". Kodwa ngo-13 kuNtulikazi abamele lesi sibonakaliso balindele ukukhangisa okumangalisayo okuthandwayo okuyokwenza ngokungalindelekile impilo yabo yesikhathi esizayo
Sekuyisikhathi sokusebenza kanzima futhi uthole okuningi kunokujwayelekile. Ukuhlanganiswa okuphumelelayo kwamaplanethi kuzothatha umsebenzi wokwandisa emkhakheni wezobuchwepheshe, futhi phambili, akukho ubunzima nokudumazeka kulindeleke. Ekupheleni kwesonto, u-Streltsov ulindele umklomelo wemali noma ukumangala okumnandi kumuntu othandekayo.
Leli sonto kuzoba ngabamele abamele lesi sibonakaliso baphumelele ngokuphumelelayo enkundleni yothando. Balinde inoveli entsha, uhambo oluthakazelisayo noma usuku olungavamile. Isikhathi esifanele kakhulu sokuqinisa ubudlelwane obungathandeki obungathanda ukuvuselela, ukuphefumula impilo entsha kubo. Emkhakheni wezobuchwepheshe, ukukhishwa kwesikhashana, nakuba abasebenzi abakhuthele baningi amathuba okuthola ukunikwa kwabaphathi babo. Usuku olumnandi kakhulu ngo-September 14.
Iviki elinzima labamele abamele lesi sibonakaliso, esidinga ukuhlushwa okukhulu nokuhlushwa. Indawo yamaplanethi ingathinta isimo sengqondo se-Aquarius, okwenza izilo zokucindezeleka ngisho nokucindezeleka. Ngakho-ke, kubalulekile ukuqhuba indlela elinganisiwe yokuphila, ukuxhumana kuphela nabantu abaseduze, abathembekile futhi hhayi ukuchitha amandla namandla phezu kwezenzo nezenzo ze-rash. Isikhathi esithandekayo sokusungula ubuhlobo obuqinile nezihlobo nabangane, ukuziqaphela nokuthuthukiswa kwezwe langaphakathi.
Abamele lesi sibonakaliso ngesonto elizayo kumele baveze ngokucacile imigomo yabo ngokushesha futhi basebenze kanzima ukuze bazuze. Ukuze uthole impumelelo kuzodingeka usebenze kanzima, kodwa umphumela ngeke uthathe isikhathi eside. Ukwesekwa komuntu othandekayo kubalulekile, kokubili ukuziphatha nokuphathekayo. Ibhizinisi lebhizinisi lizoqeda okwesikhashana lo muntu, kodwa ekupheleni kwenyanga amaPisces azophinda aphonseke ekuthambekeni kokuthandana.
I-Horoscope ye-Taurus-amadoda ngo-2016 - uthando nangonyaka wokuzalwa
I-horoscope elungile yeviki likaDisemba 25-31, 2017
I-Horoscope ngo-December 2017 - owesifazane-Amapisisi - avela kuTamara Globa no-Angela Pearl
Izimpawu eziphumelele kakhulu ze-zodiac ngo-2018
Izimpawu ze-zodiac, elinde ushintsho olukhulu ngo-2018
Amabhubesi: i-horoscope ekwindla 2013
I-Horoscope yeSagittarius-abesifazane ngo-Okthoba 2016
Ukugeza ngesikhathi sokuya esikhathini: kungaba noma akunakwenzeka?
I-Boho yangaphakathi - umkhuba-2016
Ukuvikela amalungelo wengane enkulisa
Indlela yokupheka i-pizza ekhaya
Izici zohlobo lwe-Welsh Corgi Cardigan
I-tortilla noma i-omelette yaseSpain
Izambatho zoboya ezinomfashini, Ubusika 2015-2016: isithombe samamodeli wezimfashini kanye nezitayela zezingubo zoboya besifazane, Autumn-Winter 2015-2016
Ukuzivocavoca ukuthuthukiswa kwesandla esihle semoto
U-Ksenia Borodina no-Kurban Omarov babuyisana ngemuva kokumenyezelwa kwesahlukaniso, isithombe
Uyazi kanjani ukuthi ushukela lungakanani esitsheni?
Wedding igqoka izintombi zomakoti
Indlela yokuhlala enhle ekushiseni?
Indlela Yokwenza I-Balm, I-Lip Scrub
Izitshalo zangaphakathi: vriesia
Kungani abesifazane banquma ukuhlinzekwa ngeplastiki?